PS4 အတွက် တရုတ် DOSLY Gamepad Controller၊ ကြိုးမဲ့ PS4 Controller နှင့် PS4/Slim/Pro (Black) စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Mcldosly
PS4 အတွက် DOSLY Gamepad Controller၊ ကြိုးမဲ့ PS4 Controller အတွက် PS4/Slim/Pro (အနက်ရောင်)
1.AllowweEN theme ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော Third PARTY WIRELESS CONTROLLER- ၎င်းသည်တရားဝင်ထိန်းချုပ်ကိရိယာမဟုတ်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အစားထိုးမှုဖြစ်သည်၊ အနက်ရောင် Halloween စတိုင် ps4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် အလွန်နာမည်ကြီးဂိမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးနေသည်။Win 7/8/9/10/XP/Vista စသည်တို့ကဲ့သို့သော Windows စနစ်များအားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2.HIGH-FIDELITY WIRELESS AUDIO နှင့် 1000mAh ဘက်ထရီဘဝသို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း- ပေါင်းစပ် accelerometer နှင့် gyroscope သည် မြင့်မားသော sensitivity ရှိပြီး ကြာရှည်ကိုင်ထားရန် ပိုအဆင်ပြေသည်။တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ အားသွင်းချိန် 2.5 နာရီနှင့် ကစားချိန် 10 နာရီအထိ လိုအပ်သော ကြိုးမဲ့ ps4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာ။
3. အလွန်နှစ်ခြိုက်စွာ ဂိမ်းဆော့ခြင်းအတွေ့အကြုံ- New Lip Print Black PS4 controller သည် 3.5 mm audio port ၊ controller အတွင်းတွင်ပါရှိသော built-in စပီကာကို ပေါင်းထည့်ထားပြီး၊ ၎င်းကို သင့်မိသားစု သို့မဟုတ် အခန်းဖော်ကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ player နှစ်မြှုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည် .
4. ခလုတ်များနှင့် ဂျွိုင်းစတစ်များအတွက် ပိုကောင်းသော ပစ္စည်းများ သည် သင့်အား အများဆုံး ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက် သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသည်- တင်းကျပ်စွာ စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ခလုတ်များနှင့် ps4 Joystick များကို အကြိမ်တစ်သန်းအထိ အသုံးပြုနိုင်သည်။ကြိုးမဲ့ ps4 ဂိမ်းကစားသည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို အချိုးမညီသော ဂျစ်စတစ်များဖြင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားသောကြောင့် သင့်လက်မတွင် ကြွက်သားများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ထိရောက်စွာ သက်သာစေနိုင်သည်။
5. သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့် ကလေးများအတွက် အံ့အားသင့်စရာလက်ဆောင်- ကြိုးမဲ့ ps4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် သူငယ်ချင်း၏မွေးနေ့နှင့် Halloween၊ ကျေးဇူးတော်နေ့၊ ခရစ္စမတ်ကဲ့သို့သော မည်သည့်ပွဲတော်အတွက်မဆို အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်များဖြစ်နိုင်ပါသည်။
FOB စျေးနှုန်းUS $0.5 - 9,999 / အပိုင်း
အနည်းဆုံး မှာယူမှု အရေအတွက်-100 Pieces/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း:တစ်လလျှင် 10000 Pieces/Pieces
P4/P4 Pro/PC (Win7/8/8.1/10) သို့ မည်သို့တွဲချိတ်ရမည်နည်း။
P4-ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို ပိတ်သွားသောအခါတွင် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို USB ကြိုးမှတစ်ဆင့် P4 ကွန်ဆိုးလ်သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ အဝါရောင်အားသွင်းအလင်းကို ဖွင့်ပြီးနောက် တွဲချိတ်ရန် "P4" ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။
PC:(1) Controller ကို PC USB ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကြိုးတပ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုပါ။
(2) Share ခလုတ်နှင့် PS ခလုတ်မှတဆင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာကို Notebook သို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
ဂိမ်းကစားသူများသည် ကြိုးတပ် သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့ကစားခြင်းကဲ့သို့သော အရာများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည့် Layoutits များကို မယုံနိုင်လောက်အောင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်၊ Evolved analog sticks များသည် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသော တိကျမှုကို ရရှိစေသည်။ High Precisive D-padP4 gamepad controller သည် သင်၏ ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ခလုတ်များ၏ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသော အပြင်အဆင်နှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော dual analog sticks များသည် အရေးကြီးသောအခိုက်အတန့်များ၏ တိကျမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကို လျှော့ချနေစဉ် ဂိမ်းကို ရိုးရှင်းစေသည်။ High Precisive D-pad The trigger ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေရန် မြှင့်တင်ထားပြီး သင့်ဂိမ်းတွင် သင်လိုချင်သောအရာများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
SHARE ButtonSHARE ခလုတ်သည် လက်ငင်း ဂိမ်းဆော့သော ဗီဒီယိုနှင့် မျက်နှာပြင် အပ်လုဒ်များဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေး အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုများကို လွယ်ကူစေသည်။ Multi-touch ကိုပံ့ပိုးပေးသည့် Sensitive Touch PadTouch pad သည် ဂိမ်းကစားနိုင်ခြေအသစ်များကိုဖွင့်ပေးသည်၊ ပရီမီယံဂိမ်းထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် တကယ့်ကစားသမားများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ Dual.shock တုံ့ပြန်ချက်သည် ဂိမ်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ရှော့ခ်မော်တာ ၂ ခုကြောင့် တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် တိုက်မိသည့်အခါ ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် သင့်အား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ တုန်ခါမှုတုံ့ပြန်ချက် ပေးနိုင်ပါသည်။
ယခင်- DOSLY PS4 Controller ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် PS-4/Pro/Slim/PC နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး Dual Vibration Game Remote-1000mAh
နောက်တစ်ခု: PS4 အတွက် ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ တပ်ဆင်ပြီး 1000mAh အားပြန်သွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ (ရွှေရောင်) ပါရှိသော PS4 ထိန်းချုပ်ကိရိယာအတွက် အစားထိုး
DOSLY PS4 Controller ကြိုးမဲ့ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ပေါင်းစပ်...
USB ကြိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ V2 ကြိုးမဲ့ဘလူးတုသ်...
DOSLY Wireless Controller သည် PS 4/...
Joypad Controller သည် Switch၊ Joyco...
Nintendo Swit အတွက် Switch Controller အစားထိုး...
လိပ်စာ-အခန်း 2214၊ Fenlin International Building Longgang Avenue၊ Longgang၊ Shenzhen၊ China